हार्दिक बधाई : ८४ वर्षीया इन्जिनियर मित्रलालले ६५ बर्षिया सुब्बा पद कि सरकारी जागिरे महिलासंग गरे बिवाह ! – AB Sansar
हार्दिक बधाई : ८४ वर्षीया इन्जिनियर मित्रलालले ६५ बर्षिया सुब्बा पद कि सरकारी जागिरे महिलासंग गरे बिवाह !
December 12, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on हार्दिक बधाई : ८४ वर्षीया इन्जिनियर मित्रलालले ६५ बर्षिया सुब्बा पद कि सरकारी जागिरे महिलासंग गरे बिवाह !
काठमाडौ । लामो समय एकल जिवन बिताएका इलामको पिपलबोटेका ८४ वर्षीया इन्जिनियर मित्रलाल भट्टराईले बेहुली भित्र्याएका छन् । उनले ६५ वर्षीया महिलालाई बेहुली बनाएका हुन् । भट्टराईले नेपालगञ्ज नगरपालिकाकी सरकारी जागिरे मालती आचार्यलाई बेहुली बनाएका छन् । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
श्रीमतीको नि धन पछि लामो समय एक्लै बसेका उनले वृद्धअवस्थामा साथीको आवश्यकता परेकाले विवाह गरेको बताएका छन् । इलाम जिला पञ्चायतमा रहेर काम गरेका भट्टराई पछि काठमाडौंमा सरुवा भएका थिए । उनी सिडीई भएर रिटायर्ड भएका ब्यक्ति हुन् । २०३२ सालतिर भारतको कलकत्ताबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गरेका भट्टराईकी पहिलो श्रीमतीको १७ वर्ष अघि नि धन भएको हो ।
दुवै जनाको मन मिलेर एकअर्काको सहाराका लागि बिहे गरेको भए पनि सामाजिक संजालमा नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै उनले वास्तविकता बुझेर मात्र टिप्पणी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका एक आफन्तले भने, ‘उहाँहरु एकअर्काको सहारा बन्नुभएको छ । यो जीवन उहाँहरु आफैले रोज्नुभएको हो । यसमा कसैले टाउको दु खाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
नेपाली सेनाका अधिकृत थापाले रचे इतिहास, जिते बेलायतको सर्वोत्कृष्ट सैनिक अवार्ड
आज भारतीय चर्चित अभिनेता जोन अब्राहमको जन्मदिन
December 17, 2020 Ab-संसार
संसार हेर्ने नजर बदल्ने नेपालका ५० महिलाको सूचीमा डा.सरीता श्रेष्ठ
April 14, 2021 Admin01
गाँस कटाएर श्रमिकले पठाए सिलिन्डर May 16, 2021
बाग्लुङ कालिका माइको दर्शन गर्दै जेठ ०२ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस,भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस May 16, 2021
बिहानै भारत बाट आयो एकदम दुःखत खबर यो कूरा कसैलाई थाहा छैन सक्दो सेयर गरेर ३ करोड़ जनता एकजुट हौ. May 16, 2021
बिहेभोजले निम्त्यायो विपत्ती : गाउँ नै संक्रमित, एकै घरका ४ जनाको मृत्यु May 16, 2021
कोरोनासंगै आयो फेरी अर्को नयाँ रोग ‘ब्ल्याक फंगस’, जसले आँखा नै निकाल्न बा’ध्य पार्छ ! May 15, 2021